Kukholelwa ukuthi ukulala kungumzuzu lapho umzimba uhlala khona, kukhona ukubuyiselwa kwamaseli nokuphumula kwenyama yonke. Amaphupho ahlukile, ngakho-ke kunezincwadi eziningi zokuphupha lapho iphupho elifanayo lihunyushwa ngezindlela ezahlukene. Namuhla sizokhuluma ngokuthi ingubo ibukeka kanjani.
Ibhuku lephupho laseFrance
Uma uphupha ukuthi uqasha ingubo, ke ucabange lokhu yisixwayiso emzimbeni mayelana nokugula okungenakuqala.
Uma ugqoka ngengubo - maduze uzokwenza uhambo oluhle kakhulu.
Ibhuku lephupho lika-Esoteric.
Uma ugqoke ingubo yomunye umuntu, khona-ke empilweni uzothatha izinkathazo zomuntu kanye nokukhathazeka kwakhe.
Ukubona ingubo entsha yenzelwe inzuzo.
Ezingcolile futhi eziqhekekile-zilinde ukukhathazeka noma ukulahlekelwa imali.
Uma ingubo igubha - linda izinkinga eziningi.
Kodwa ingubo yangasese engavamile iveza ukubonakala kwemicimbi engavamile empilweni.
Ukuhunyushwa kwencwadi yamaphupho yanamuhla
Uma ugqoka ingubo emihle ephusheni, khona-ke ekuphileni uzohlonishwa.
Ukugqoka ingubo ebizayo kusho inkinga noma umona.
Ukuzibona wena ogqoke ingubo ende kakhulu kusho ukuthi empilweni usenkingeni, uma ingubo isifushane , ulinde isipho.
Ukugqoka ingubo yephepha kusho ukwenza inzuzo esikhathini esizayo esiseduze.
Umngcwabo amaphupho okubonakala komngane omusha.
Futhi ingubo eyenziwe ngamasethi iveza ukucasula.
Uphuphe ngendwangu engcolile, egcwekile - elinde ukungajabuli ohlangothini, ovulekile - ekuqamba amanga nezinkinga.
Kodwa izingubo ezihlotshisiwe zichaza injabulo.
Uma uthenga ingubo egqunywe isilikhi, empeleni ungangena ekuthembekeni komuntu onoyingozi kakhulu, nangenxa yephutha lakho.
Ukugqoka ingubo eluhlaza ephusheni kusho umshado osheshayo, injabulo, ukuqonda okufanayo nomuntu othandekayo.
Ukuthenga ingubo ephusheni ukubuyisana esikhathini esizayo esiseduze nomngani.
Ukugqoka ingubo ye-chic kuyoba okuqukethwe.
Iphupho elifushane eliyinkinga yenkinga ebhizinisini.
Iphuliwe - ukugoqa.
Ukuhlanza ingubo ephusheni kusho ukuthi ukukhuthala kwakho kuyovuzwa nganoma iyiphi indlela.
Vula ingubo - ukuze uthuthuke.
Emabala, kusho ukuthi udumo lwakho luzophazamiseka empilweni.
Ukubona inamba enkulu yokugqoka - ukubhuka nokuhlambalaza.
Umbala wengubo unencazelo yawo:
- ophuzi - amanga kanye nomona ngabanye;
- eboshwe ngezintambo zegolide - ngenjabulo enkulu nokuvikelwa ngaphandle;
- mhlophe - lindela umshado;
- abamnyama - ezindabeni ezibuhlungu;
- grey - ukusebenza;
- oluhlaza noma umbala wezulu - ukufeza isifiso esithandekayo;
- kodwa ezimibalabala - kwi-ambulensi.
Dream Interpreters of Evdokia
Ngokusho kwakhe, ukugqoka ingubo ephusheni kusho ukulinda umonakalo nobumpofu.
Ukugqoka okungcolile kusho ukulahlwa abanye.
Ukubona ingubo egqoke kahle kusho isimo sengqondo esihle kumuntu wakho.
Indwangu emnyama isho ukudabuka.
Uma uzama ngephupho, uzame ukuhlangana nomphikisi.
Kodwa uma uzama ngesembatho esifanelekayo, futhi unquma ukuguqula wena ephusheni, ulahlekelwe isisindo - khona-ke empilweni umhlangano nomphikisana uzophendukela ekunqobeni kwakho futhi uthembisa uthando oluqinile.
Ukubona ingubo engavamile, evamile kumphuphi akusho lutho nhlobo. Lena iphupho elingenalutho.
Ngokuba umuntu ocebile kusho ukuhlonishwa nokukhuthazwa esikhundleni.
Kubampofu, kusho ukuhlupheka.
Ukuze isiguli - ukufa.
Igqoko elisha lihunyushwa ngezindlela ezahlukene - lisho abantu abajwayele ukuxhumana nabo, impilo entsha kanye nezigameko, kanye nenzuzo, injabulo nokuphumelela ezindabeni zabo.
Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo ezingcolile noma ezigqamile, usuke ukhona ngenxa yengozi noma ukudabuka.
Uma uphupha ngengubo evuthayo - uzoxabana nabangane, ukunyundela, ukuhlukumeza, ukukhwabanisa, ukunyundela.
Ukugqoka amathoni akhanyayo nokukhanya kusho ukukhulisa ingcebo nodumo.
Ukulahlekelwa ingubo kukuthembisa ukulahlekelwa udumo.
Uma umuntu ephupha ukuthi ugqoke ngengubo yowesifazane, empeleni ulindele ukukhohlisa.
Noma yikuphi ukugqoka ozibonayo ephusheni, kufanele uthembele ekuboneni kwakho. Ngezinye izikhathi lokho okuchazwe ephusheni akuhambisani ncazelo. Hhayi ngoba konke okulotshwe kuyizingamanga. Kodwa ngoba umuntu uyedwa futhi angase abe nencazelo yakhe yephupho.
Amaphupho angasho ukuthini ngomuntu owayengumthandi
Kungani amadoda ethandana nabanye, futhi eshada nabanye?
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha yesisu nesisu
Leo: isici sesibonakaliso se-zodiac
I-Britney Spears Yidla: 5 Izinketho Zokudla
Kusho ukuthini ukushayela imoto ngephupho?
Indlela yokususa ama-acne nama-acne
Iphunga elingavamile: Indlela Yokusika Ibhasi Lezimpumputhe Nge-Halloween
Uma udinga ukuphumula, ungabe uphumule kanjani?
Imithetho yokunakekelwa kwezinwele ezimhlophe
Njengoba njalo ukugcina isimo sengqondo esihle